Amanqaku kaLiza Nebel malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu NguLiza Nebel
U-Liza nguMongameli, i-COO, kunye noMsunguli we-BlueOther, iqonga lesicwangciso se-AI esinceda iinkampani ukuba ziphumelele ukhuphiswano. ULiza uchithe iminyaka engama-20 edlulileyo eqhuba uphawu kunye neendlela zokuthengisa ze-AT & T, Visa, DRM, American Express, Barclays, Time Warner, IBM, nabanye. KwiBlueOther, uLiza ukhokelela kwintlawulo yokwakha iinkqubo zokufunda ngomatshini ezisombulula iingxaki kwaye zibonelela ngombono kwizinga elikhulu kunye nesantya. Ngomsebenzi wakhe, uLiza uye waziwa kwi-SF Business Times 'Abanini beShishini abaPhambili abali-100.
NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 16, 2020 NguLiza Nebel
Qho ngonyaka, ngakumbi xa sisondela kwiiholide kwaye sibonisa ezona phulo zingalibalekiyo zonyaka, kukho amadabi amaninzi ukubona ukuba zeziphi iimveliso ezithandileyo kubaphulaphuli. Ngoxinzelelo kunye nokungaqiniseki okuziswe ngulo bhubhane kulo nyaka, kukho idabi elitsha, kwaye ngeli xesha lidabi lempilo yethu. Njengokuba sasiziqhelanisa nokwenza yonke into sisuka ekhaya, sabona indlela ubhubhane aqhubela ngayo ikamva lomzimba. Izixhobo ezi-Smart ekhaya njenge